Muddada Dheer ee la Sugo Dugsiyada Xannaanada Dhallaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muddada Dheer ee la Sugo Dugsiyada Xannaanada Dhallaanka
La daabacay torsdag 31 maj 2012 kl 09.18
Dawladda ayaa ku talo jirta baaritaan ay iu saarto sidii maamullada degmooyinka loogu qasbi lahaa mag-dhaw ey siiyaan waalidiinta aan dhallaankooda u helin dugsi xannaano muddadii ku hagaagsaneyd. Waa tallaabo lagu damacsan yahay iney degmooyinku abuuraan goobo cusub ee dugsiyada xannaanada dhallaanka.
- Waxaan ka tallaaba qaadayaa sidii lagu adkeeyn lahaa xuquuqda waalidku ku leeyihiin maamullada degmooyinka. Waa mid lagu caqabadeeynayo degmooyinka aan waajibaadkooda uga soo bixin sidii looga baahnaa. Halka xeerka maanta jiraa aanu ahayn mid ciqaabaya degmooyinka, sida ay sheegtay Nyamko Sabuni, ku simaha wasiirka tacliinta.
Baaritankan ayaa sidoo kale la filayaa iney ka soo baxaan jawaabo la xiriira tallaabada loo baahan yahay in la qaado si degmooyinka si habsami leh ugu hogaansamaan xeerka iyo sidoo kale xadka dhibaatadaasi gaarsiisan tahay, maadaama aanay jirin tira-koob middaa laga hayo.
Muwaadin Ola Spännar iyo qoyskiisa ayaa u raadiyey goob xannaanada dhallaanka ee inankooda nawaaxiga Enskede ee magaalada Istockholm:
- Meel walba ayaan wax ka raadinay, islamarkaana annaga oo liiska degmadana isku qornay. Waxaan sidoo kale isku qornay shan leeymo ee kala duwan. Xannaano walba ayaan tijaabinay haddey noqon lahayd mid degmadu maamusho iyo kuwa mulkida loo leeyahay. Waa xaalad keeni karta dhaqaale-xumo maadaama shaqadiina aadan tegi kareyn, islamarkaana aanu jirin cid mushaar ku siisa. Bishii juun ayaan shaqada la iga sugayey, halka aan boos u helley wiilka bishii agoosto, iyadoona uu naga go'ay dhaqaalihii xannaanada ee ilmaha yar.
Hayadda kormeerka iskuullada ayaa ku sheegtay war-bixinteedii ugu dambeeysey in 42 ka mid 290-ka degmo ee dalku ka kooban yahay ey sheegeen in aaney ka soo bixi kari lahayn xeer noocaasiya hadduu hir-galo iyo in afar bilood gudahood lagu meeleeyo dhallaanka u baahan goob xannaano.
Nyamko Sabuni, ku simaha wasaaradda wax-barashada ayaa sheegtay in waalidiinta la siiyo mag-dhow u dhigma dhaqaalaha ey ku lumiyeen muddada ey dhallaanka guriga ku hayaan ee aan meel looga helin xannaanada.
- Waa howl ey degmooyinku xal u heli karaan haddii ey qiimeeyaan muhiimaddab ey leedahay, sida ay sheegtay Nyamko Sabuni.